ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ - ၁၁
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးH.E.Mr. Tim Enderlin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဥပဒေ (IHL) နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အရာရှိများတက်ရောက်နိုင်ခဲ့မှုနှင့် ထပ်မံတက်ရောက်နိုင်ရေး သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များနှင့်နည်းပြများက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် သင်တန်းပို့ချပေးနိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆဲကိစ္စရပ်များ၊ လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော် မရှင် (ICOE)၏ အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံသံအမတျကွီးအား လကျခံ တှဆေုံ့
နပွေညျတျော၊ ဖဖေျောဝါရီ - ၁၁
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးသညျ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ သံအမတျကွီးH.E.Mr. Tim Enderlin ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) နှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ၌ အပွညျပွညျဆိုငျရာလူသားခငျြးစာနာ ထောကျထားမှုဥပဒေ (IHL) နှငျ့ ခေါငျးဆောငျမှုဆိုငျရာသငျတနျးကို မွနျမာ့တပျမတျောမှ အရာရှိမြားတကျရောကျနိုငျခဲ့မှုနှငျ့ ထပျမံတကျရောကျနိုငျရေး သငျတနျးဖှငျ့လှဈပေးနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံမှ ပညာရှငျမြားနှငျ့နညျးပွမြားက မွနျမာနိုငျငံသို့ လာရောကျ သငျတနျးပို့ခပြေးနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျဆိုငျရာ ဆကျလကျဆောငျရှကျဆဲကိစ်စရပျမြား၊ လှတျလပျသောစုံစမျးစဈဆေးရေးကျော မရှငျ (ICOE)၏ အစီရငျခံစာနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆကျလကျဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ကိစ်စရပျမြားကို အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွပွီး တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး)နှငျ့ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။